Shiinaha Carbomer1342 warshad iyo soosaarayaasha | Yinuoxin
Carbopol, oo sidoo kale loo yaqaan carbomer, waa cusbi iskudhafan iskudhafan oo iskudhafan oo leh acrylic acid by pentaerythritol iyo wixii lamid ah. Waa jaangooye aad u muhiim ah. Dhex-dhexaadinta ka dib, Carbomer waa shaashad jel aad u fiican oo leh dhumuc, ganaax iyo adeegsiyo kale oo muhiim ah. Waxay leedahay hanaan fudud iyo xasillooni wanaagsan. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa emulsion, kareem iyo jel.
Magaca Kiimikada: Iskudhafka iskudhafan ee Polyacrylic Acid
Qaab dhismeedka Molecular: - [-CH2-CH-] N-COOH
Muuqaalka:budo cad oo dabacsan
Qiimaha PH: 2.5-3.5
Nafwaayay: 20000 ～ 40000 mPa.s
Macdanta Carboxylic acid%: 56.0—68.0%
Bir culus (ppm): Pp20ppm
Haraaga Solvents%: ≤0.2%
Astaamaha: Waxay leedahay saameyn aad ufiican oo isku dhafan waxayna soo saari kartaa biyo saafi ah ama jel aalkolo-biyo ah, waxayna si wax ku ool ah uga hortagi kartaa ion.
Qiyaasta Codsiga:Waa nidaam qayb ahaan qaybinta daroogada waxayna leedahay saameyn polymerization-iyo-emulsification. Jawiga elektaroolka, sidoo kale waa wax ka bedelida cilmiga rheology-ga.
Carbomer - Aqoonsi
Qaado badeecada 0.1 g, ku dar biyo 20ml iyo 10% sodium hydroxide xal 0.4ml, taasi waa nooc jel ah.
Qaado 0.1g sheygan, kudar 10ml oo biyo ah, si fiican u rux, kudar 0.5ml thymol buluug tilmaame, waa inuu noqdaa oranji. Qaado 0.1 LG ee sheygan, ku dar 10 ml oo biyo ah, si fiican u rux, ku dar 0.5 ml xalka tilmaame casaan, waa inuu noqdaa huruud.
Qaado 0.lg ee badeecadan, ku dar 10ml oo biyo ah, ku hagaaji qiimaha pH 7.5 oo leh xalka lmol / L sodium hydroxide, kudar 2ml oo ah 10% xalka gaaska kaalshiyamka inta aad walaaqayso, isla markana soosaara cadcad.
Muuqaalka nuugista infrared (xeerka guud ee 0402) ee sheygan waa inuu lahaadaa nuugis dabeecad leh tirada mowjadda ee 1710cm-1 ± 5cm-1, 1454cm-1 ± 5cm-1, 1414cm-1 scrrt1, 1245cm-1 ± 5cm-1, 1172cm-1 ± 5ccm-1, 1115cm-1 ± 5citt1 iyo 801cm-1 ± 5citt1, kuwaas oo 1710cm-1 uu leeyahay nuugista ugu xoogan.
Habka Xirxira: 10kg kartoon
Nolosha shelf:saddex sano
Kaydinta iyo Gaadiidka: Badeecadani waa mid aan sun ahayn, ololka celisa, sida shixnadaha guud ee kiimikooyinka, la shaabadeeyey oo lagu keydiyay meel qalalan.
Faallooyin:shirkadeena sidoo kale waxay bixisaa noocyo kala duwan oo alaabooyin taxane ah Carbopol ah.
Hore: Carboomer 8080